စကျတငျဘာ 16, 2018 – Healthy Life Journal
၊ ငွေစင်ကြယ်ယံ ၊ ဆန်လုံးညိုဆိုတာ အညိုရောင်ဖွဲနုကို မဖယ်ရှားဘဲလုပ်ထားတဲ့ဆန်ပါ။ ဒါကြောင့် ဆန်လုံးညိုကို အခွံချွတ်မထားတဲ့ ကောက်နှံစာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ဆန်လုံးညိုက အဖြူရောင်ဆန်ထက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုညီညွတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် ဆန်ကို အဖြူဖြစ်အောင် အခွံချွတ်ကြသလဲ။ အကြောင်းကတော့ လူအများစုက ထမင်းလေး...
ရင်ကျပ်ပြီး ချောင်းဆိုးခြင်းအတွက် သဘာဝဆေး
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အအေးမိဝေဒနာခံစားရတာ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်တာ၊ နှာခေါင်းမြှေးရောင်ရမ်းတာ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊ လေပြွန်ရောင်တာစတာတွေက ရင်ဘတ်ထဲ တင်း ကျပ်ရာကဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာတွေ အမြန်ဆုံးသက်သာစေဖို့ ထိရောက်တဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေရှိပါတယ်။ (၁) ရေနွေးငွေ့လှုံပါ ရေနွေးငွေ့လှုံပြီး ရှူသွင်းတာကြောင့် အချွဲပျော်စေပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်း...
ဆေးလိပ်အစား အစားထိုးရမည့် အရာများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူအများစုက ပျင်းရိတာ၊ အိပ်ပျော်တာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများတာနဲ့ ပင်ပန်းတာ. . စတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တိုင်း၊ သောက်တိုင်း အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းထဲ အဆိပ်အတောက်ထောင်ပေါင်းများ စွာဝင်ရောက်နေပြီး နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ၊...
ရှင်းပြပါဆရာ . . . (၈) ဆိုးသွမ်းလူငယ် အပိုင်း(၁)
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) သြစတြေးလျနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်၊ ဒါဝင်မြို့တော်မှာ စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကဖြစ်ပါတယ်။ အထက်တန်း ကျောင်းတစ်ကျောင်းက ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ ကျောင်းတွင်းစိတ်ကျန်းမာရေး ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ စာရေးသူတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ “ အပြုအမူ ဆိုးသွမ်းဝေဒနာ” လို့...
ဆီးခုံပေါ်က အဖုသေးသေးလေးတွေ . . .
မေး ။ ဆီးခုံပေါ်မှာ အဖုသေးသေးလေး အရင်ထွက်တယ်။ ၂လလောက်တော့ ရှိပါပြီ။ အခုအဖုလေးတွေက များလာလို့ပါ။ အဲဒါဘာဖြစ်တာလဲသိချင်လို့ပါ။စိုးရိမ်ရလားဆိုတာလည်း သိချင်ပါတယ်။ Zinmar Win (Fb) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ ဆီးခုံမွှေးမှာဆိုရင်တော့ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ဖြစ်တဲ့...
အသက်မကြီးသေးပါ ဖေတို့ မေတို့ . . .
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မနေ့က ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးဆီ အင်တာဗျူးသွားတော့ ကျွန်မနဲ့စကားပြောနေတုန်း လူနာရောက်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ “သမီး ဒီမှာပဲထိုင်ပြီး ခဏစောင့်၊ အန်တီခဏကြည့်ပေးလိုက်ဦးမယ်” လို့ဆိုပါတယ်။ လူနာမဟုတ်ဘဲ လူနာရှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက စစ်ဆေးထားတဲ့ အဖြေလွှာတွေနဲ့အတူ ဆေးခန်းထဲ ၀င်လာပါတယ်။ အဖြေတွေကို ကြည့်ရှူစစ်ဆေးပြီး...
တက္ကစီဒရိုင်ဘာမိခင် မွေးကင်းစသမီးလေးကို ကားပေါ်တင်ကာ ညတိုင်းတက္ကစီမောင်းနေ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ ခင်ပွန်းမရှိတဲ့ အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ် တက္ကစီဒရိုင်ဘာ လီရှောင်ယွန်းဟာ သမီးငယ်ယီယီကို ကားပေါ်တင်ကာ ညဆိုင်းတက္ကစီဆွဲခဲ့တာ ၃နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ တက္ကစီပေါ်မှာ အတူတကွ ညပေါင်း ၉၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီး ယခုယီယီရဲ့အသက်တောင် ၃...
ခါးနဲ့ ကျောပြင်အဆီပိုထွက်ခြင်း ကင်းဝေးစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အမျိုးသမီးအများစုက ၀မ်းဗိုက်အဆီလျော့ဖို့ပဲ စိတ်အားထက်သန်ပေမယ့် ခါးဘေးတစ်ဝိုက်နဲ့ ကျောပြင်မှာမလိုလားအပ်တဲ့ အဆီပိုတွေ ရှိနေတာကိုတော့ လျစ်လျူရှူထားတတ်ကြပါတယ်။ ခပ်ကျပ်ကျပ် တီရှပ်ဝတ်တဲ့အခါ၊ အပျော့သားအင်္ကျီ ကျပ်ကျပ်ဝတ်တဲ့ အခါနဲ့ ဘရာစီယာကို နည်းလမ်းတကျ မ၀တ်တဲ့ အခါတွေမှာ ခါးဘေးတစ်ဝိုက်နဲ့...
ကိုယ်ဝန်နှင့် ဂျာမန်ဝက်သက်(Pregnancy and Rubella)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁။ ဆရာ ကျွန်မ – – -မှာ နေတာပါ။ အသက်က ၃၂နှစ်။ ကလေးတယောက်ရှိပါတယ်။ ဟိုနေ့က သွေးစစ်လိုက်တာ သွေးထဲမှာ ဓာတ်တစ်ခုက နည်းနေတယ်ပြောတယ်။ ဆေးထိုးရမယ်တဲ့။ အဲ့ဆေးထိုးပြီးရင် ၃လအတွင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့လည်း မရဘူးတဲ့။ ထိုးတဲ့ဆေးကMMR လို့တော့ရေးထားတယ်။...